MARKI SALAANTU QALALAASE NAGA DHEX RIDO WIXI KA SII FOG MAXAAD U MALAYNAYSAA? | Wacyigelin's Blog
Ahmed Galaydh on U ISTAAG SOMALIA MPLS MNmohamed anshur on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…سليمان on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…siciid on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Abdirizaak ahmed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…mohamed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Dr. Farxaan jama on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…Peter Greste case: i… on Al-Jazeera’s Peter Grest…Johnd761 on LOS ANGELES CITY PLANER FAISAL…Mahad xiddig on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on العلم والإيمان – د. مصطف…Bucul on DHOWR ASKERI OO KA GOOSATAY JA…En ismail abdi yasin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…yassin saleh osman on KA TASHADA CADAAWOHOO ISKU TII…	MARKI SALAANTU QALALAASE NAGA DHEX RIDO WIXI KA SII FOG MAXAAD U MALAYNAYSAA?
Posted on May 7, 2010 by wacyigelin	AqrisTow, arintan aan kuu soo bandhigayo waa arin dhacda maalin walba oo aniga qudhigayga igu dhacday dhowr jeer. Tii ugu danbaysay waxaan la kulmay maalin dhowayd kadib marki anigoo dukaan Soomali leedahay wax ka iibsanaya uu soo galay nin dhalinyaro ah dabadeedna uu na salaamay naguna salaamay salaanta islaamka. Anigu waa ka yara fogaa marka waxaan rejaynayey in uu qof iiga dhow salaanta ka jawaabo balse nasiib darro nin kale oo dhalinyaro ah ayaa ugu celiyay “HI”. Anigoo maqlay waxa dhacay ayaan inta soo dhaqaaqay salaanti rediyay anigoo leh “ Wa calaykum alsalaam”. Ninki dhalinyrada ahaa ee marki hore na salaamay ayaa la hadlay kii ugu jawaabay “HI”. Doodi dhexmartay sidan ayaya ahayd anigoo midna ku magacaabay Hi maadaama uu “Hi”-da jecelyahay kankalena ku magacaabay Salaam oo aan ula jeedo salamu calaykum oo aan soo gaabiyay:
SALAM: Walaalow maad iigu jawaabtid salaanta islaamka ee aan kugu salaamay?
HI: Salaan waa salaan ee maxaad adigu ku jeceshay inaan taas kuugu jawaabo?
SALAM: Taas waa tii islaamka oo aniga iyo adiga isku keena xiraysey “Hi” se waa wax aan ugu nimid dhulkan. HI: Anigu wax dhib ah uma arko inaan “HI” kugu iraahdo maadaama ay tahay nooc salaamaha ka mid ah.
Markay sheekadi halkaa marayso oo aan leeyahy war yaa kala dhexgala nimankan maadaama aanan anigu aqoon diimeed oo aan ku xukmiyo ama aan ugu kala garnoqo aanan lahayn ayaan iska aamusay. Nasiib wanaag nin kale oo dhalinyaro ah ayaa dhinaca kale kasoo dhaqaaqay oo u yimid labadi nin. Wuxuu yiri ma waxaad rabtaan inaad iska doodaan mise hadii laydiin garnoqo nin walba gartiisa waa uu qaadanayaa?
Hal cod ayay kuwada yiraahdeen waan qaadanaynaa garteen. Anigoo faraxsan oo ilaahay qalbiga uga mahadcelinaya ayaan meel aan ka fogay soo istaagay si aan uga faiidaysto dhacdadan iyo weliba waxa uu la imaan doono ninkan dhalinyarada ah oo aan jeclaystay siduu ku bilaabay gelitaanka arinta.
Ninki dhalinyarada ahaa ee soo kala dhexgalay ayaa yiri sidan:
Horta waan idin dhegaysanayey oo maqlayey wixi idin dhex maray mana doonayo inaan cidna eed saaro balse waxaan idii sheegayaa waxa ay diintu ka qabto salaanta islaamka oo laysku salaamo iyo rediskeedaba (ka jawaabideeda). Ilaahay wuxuu ku yiri aayadaa macneheedu yahay, “Haddii salaam laydin salaamo ku salaama mid ka wanaagsan ama rediya salaanta (ka jwaaba saanta). Waxaa laga weriyay Cabdullahi Bin Cumar bin Caas (ilaahay ha ka raali noqdee) in nin uu nabiga (Salaatulaahi wa salaamuhu calayhi) waydiiyay islaamka kee ugu kheyr badan? Nabiguna (Salalaah calayhi wa salam) ugu jawaabay: Waad quudinee kii gaajaysnaa, Waadna salaamee kii aad garaanyso iyo kii aaadan garanayninba.
Abi hurayra waxaa laga wariyay ilaahay ha ka raali noqdee inuu nabigu naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu yiri: Ilaahay Subxaanahu Wa Tacaalaa markuu abuuray Nabi Aadam( Naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee) ayuu ku hyiri, Utag kuwaas oo salaan (waxay ahaayeen malaaik) oo dhegayso siday kuu salaamayaan, salaantaas ay kugu salaamaan waa salaantiina adiga iyo caruurtaadaba. Aadam (Naxarriista ilaahay dushiisa ha ahaatee) markuu u tegay malaaikti ayuu ku yiri: Alsalaamu calaykum, Malaaikti waxy ku jawaabeen: Alsalaamu calaykum waraxmatulaahi, oo ku dareen wa raxmatulaahi tiisi. Xadiiskan wuxuu ka turjumayaa aayadda aan kor ku soo sheegay. Xadiith kalena waxaa lagaga weriyay Abihurayra (ilaahay raali ha ka noqdee) inuu nabigu (naxariiis iyo nabadgelyo dushiiisa ha ahaatee) uu yiri:Gelimaysaan janada intaad ka rumaynaysaan, mana rumaynaysaan intaad iska jeclaanaysaan, ma idiin sheegaa sheey hadaad samaysaan aad isjeclaanaysaan? Salaanta ku faafiya dhexdiina (Aqristow markuu kaa horyimaado qof weji bashaash ah leh kuna salaamo waa kaaga duwanyahay kan weji macbuuska ah sow maaha?). Markay intaas dhegaha labadi dhalinyarada ahayd ku dhacday ayaa kii “HI” ku jawaabay yiri, raali iga noqo waan kaa qaldanahaye mana ogayn inay salaantu sidaas tahay oo ay tahay wax diintu na farayso. Sidi ayay ku heshiiyeen labadi dhalinyarada ahaa una wada mahad celiyeen ninki dhalinyarad ah ee soo kala dhexgalay.
Aniga oo maqlay waxa loo sheegay labadan dhalinyarada ah iyo wliba sida sahalka ah ee looga dhaadhiciyay sida dhabta ah ayaan naftayda u sheegay inaan ahay nin gebay tiisi oo u baahan inuu isdaba qabto. Anigu waxaan ahay nin hadda cimri dhexaad galay oo ku dhow marki duqnimo gar loogu soo dhigan lahaa balse marki layla soo aado garta waa ka leexdaa maxaa yeelay sifooyinki garyaqaanimo malihi aqoonna ma lihi. Tan kale waa masuuliyad aad u wayn oo laga yaabo inaan labada dhinac midkood u gooyo garta taas oo aan xaq ahayn anigoon ula jeedo gooni ah kalahayn. Ninkan dhaliyarada ah wuxuu isticmaalay aqoontiis iyo degnaashihiisa si uu u dhexgalo labadan nin waana ku guulaystay asagoo qanciyay labada dhinacba. Waxaan soo xasuustay heesti Mooge ee uu lahaa “Garta ina sanwaynaa loo gaysan jiray” markaas ayaan naftayda u sheegay inay Inasanwaynayaashi Soomalida ee garyaqaanada ahaa weli wax ka noolyihiin. Aqristow adigu sidee baad isu aragtaa xagga aqoonta iyo garyaqaanimadaba? Waxaan hubaa in aqoonta xageeda guul laga gaari karo hadii loo jeesto xageeda balse ma ogi sida garyaqaan wanaagsan lagu noqon karo ee adigu ii sheeg hadaad ogtahay. Waxaan markaas u soo dhaqaaqay dhinaca ninki dhalinyarada ahaa ee arinta galay dabadeena u tahniyadeeyay kuna iri meeshaa kasii wad wanaagga. Runti qalbigaygana waxaa ka buuxay xishood uu ku dheehanyahay masayr aan ka qabay ninkan aad iiga da’da yar ee hadana iga aqoonta iyo aftahannimada badan. Balse masayrkaygu ma ahayn mid ay ku dheehanthay cadawtooyo iyo xiqdi aan u qabo asaga ee waa mid igu dhaliyay inaan wax ka bedelo noloshayda. Maalinkaas ayaan bilaabay inaan barto diinta anigoo ku bilaabay inaan barto quraanka kana bilaabay alif wax maleh. Alxamdulilah hadda horumar wayn ayaan sameeyay laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa Faanoole fari kama qodna. Aqristow, adiga tanoo kale ma kusoo martay? Maxaad se ka faaiidaysatay? Tan keliya maaha ee dhowr jeer oo kale ayaan la kulmay arimo noocan ah balse aan wax ka dhihi Karin maxaa yeelay waxay u baahnaayeen aqoon ha ahaato mid diini ah ama mid madani ah. Waxaa kale oo aan meeshaas ka fahmay in ay dadku isbedel diyaar u yihiin hadii ay helaan kuw wanaagga si hufan ugu sheega.
Filed under: Uncategorized « WAA KUMA SOOMAALI? SOOMAIYA SOOMALI BAA LEH: DHEGAYSO ABWAANKA WAYN CABDI TAHLIIL »